Mon, Apr 23, 2018 | 21:22:49 NST
11:37 AM (2 months ago)
प्रश्नः मैले पोल्याण्ड रोजगारीका लागि म्यानपावरमा अप्लाई गरेको थिए। भिसा आउन ६ महिना लाग्छ भनेको थीयो। मैले एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट बुझाएको ८ महिना भइसक्दा नि भिसा आएन। अब एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट फिर्ता पाउन मैलै के गर्नु पर्छ ? साथै पोल्याण्डको भिसा आउन कति समय लाग्छ ?
कानून अनुसार तपाईंको पासपोर्ट कुनै संस्था वा व्यक्तिले तीन महिना भन्दा धेरै समय राख्न वा ‘होल्ड’ गर्न पाउँदैन। म्यानपावर कम्पनीले तीन महिना भन्दा धेरै समय देखि तपाईंको पासपोर्ट राखेको हो भने त्यो गैरकानूनी काम हो। त्यसका लागि तपाईंले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। विभागको कार्यालय काठमाडौंको बुद्धनगरमा छ। अथवा तपाईंले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ।